5 အီတလီမှာတော့အများစုမှာရှုခင်းသာရထားခရီး | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား >5အီတလီမှာတော့အများစုမှာရှုခင်းသာရထားခရီး
အီတလီမှာမီးရထားခရီးနှစျသိမျ့သို့သော်အချို့အထင်ကြီးအမြင်များကိုသာပူဇော်. အဆိုပါတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာ အီတလီမှာရထား ယင်းကိုကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည် တော်တော်လေးရှုခင်း သငျသညျခငျြးခငျြးတစျခုအရပျမှခရီးအဖြစ်. အီတလီနိုင်ငံအချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်, ဒရုံ Modes သာထက် ပို. ဖြစ်ကြောင်းသာယာလှပမီးရထားလမ်းကြောင်းရှိပါတယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. ဤရွေ့ကားသာယာလှပရထားကမ်းရိုးတန်းအမြင်များရန်သင့်အားဆက်ဆံမည်, အံ့သြဖွယ်သောတောင်ပေါ်ရှုခင်း, တောက်ပရေကန်များ ဒါအများကြီးပို. ဤတွင်များမှာ5အီတလီမှာအများဆုံးသာယာလှပရထားခရီး.
ကျွန်တော်တို့ကိုစာရင်းဖွင့်လှစ်ပါစို့5အီတလီမှာအများဆုံးသာယာလှပရထားခရီးအတူ – Levanto to La Spezia – Cinque Terre
အီတလီနိုင်ငံရဲ့အံ့သြဖွယ်ကမ်းရိုးတန်းကိုလိုက်နာကြောင်းမီးရထားလမ်းကြောင်းများကိုအများဆုံးပျော်စရာအကြားရှိပါတယ်. အဆိုပါ Cinque Terre ရထားလမ်း သိသိသာသာဖက်ရှင်အတွက်ဒေသ၏ငါးအီတလီ Riviera ကျေးရွာပေါင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်. Relax behind panoramic windows and soak up beautiful mountains, အဆိုပါစိမ်းပင်လယ်, bucolic စပျစ်ဥယျာဉ်, နှင့်သံလွင်အာရှရပင်. အကျဉ်းပေမယ့်အဆင်းလှပါလမ်းခရီးဘို့ Levanto နှင့် La Spezia အကြားရထားကိုယူ. သင်သည်သင်၏ရောက်ရှိပါပြီပြီးတာနဲ့ ခရီးလမ်းဆုံး, သငျသညျထို့နောက်သုံးဖြုန်းနိုင် တစ်ရက်တောင်တက် အံ့ဖှယျရွာ.
Florence Levanto မှရထား
Florence, La Spezia မှရထား
ရောမမြို့, La Spezia မှရထား
la Spezia Levanto ရထားမှ
#@andreabelussiphotographer #cinqueterrelove #love #italy #paradise #monterosso #vernazza #manarola #riomaggiore #corniglia #sea #ig_liguria_ #colors အားဖြင့်L❤️veအတွက် cinqueterre
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို Cinque Terre Italy (@cinqueterre_love) အပေါ် ဧပြီ 9, 2016 တွင် 3:22နံနက် PDT ရန်ကုန်
Sorrento မှ Naples
Travel from Naples to Sorrento and pass through the archaeological sites of Herculaneum and Pompeii. This fabulous journey provides views of တောင်ပေါ်က Vesuvius and the Bay of Naples along the way. ဤ ရထားစီးနင်း is certainly one of the အီတလီမှာအများဆုံးသာယာလှပရထားခရီး.
Bari က Naples မှရထား
ရောမမြို့ Naples မှရထား
Catania မှ Rimini – အီတလီနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေနှင့်အတူ
အကောင်းဆုံး ကနေခရီးသွားလာလမ်း မြောက်ပိုင်းအီတလီ တောင်ပိုင်းအီတလီကိုရထားနဲ့အရှေ့ကမ်းခြေကိုဆင်းဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါလိုင်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှုခင်း၏တစ်ဖွဲ့လုံးကိုခြောက်နာရီကြာကမ်းရိုးတန်းမှအပြိုင်ပြေး. Rimini မှာ Start, က forward facing တစ်ဦးထိုင်ခုံဖမ်းပြီးနှင့်တစ်ဦးအဘို့သင်တို့နှင့်အတူပျော်ပွဲစားယူ အလွခရီးစဉ်! Catania ဖို့လမ်းကြောင်း en, ရထားသံပုရာအာရှရပင်များနှင့်ချော်ရည်စီးဆင်းမှုဖြတ်သန်းသွားသည်, ခရီးတစ်လျှောက်လုံးအချို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဘူတာမှာမှတ်တိုင်များနှင့်အတူ.
Messina Catania မှရထား
ဆိုင်းရာကူစ်း Catania မှရထား
Taormina Catania မှရထား
Palermo Catania မှရထား
ငါ၏အပြတင်းပေါက်ထဲက, Catania #flowerstagram #photooftheday #flowerslovers #flowerstyles_gf #loves_united_catania #flowers #vivocatania #amazing #catania #sun #autumn #autunno #sopretty #blooms #love #window #floral #nature #picoftheday #sunraylabs #flowersofinstagram #floweroftheday #flowermagic #tramonto # ပွင့် #instablooms #torino #cataniabedda #beautiful #soleil
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို E ကို. Emancipato ဓါတ်ပုံ© (@ edoardo.emancipato) အပေါ် နိုဝင်ဘာ 15, 2017 တွင် 7:55နံနက် PST
Florence ဖို့ဗင်းနစ် –5အီတလီမှာအများဆုံးသာယာလှပရထားခရီး
In-အကြားတစ်ဦးလှပသောရထားခရီးအတူအီတလီရဲ့နာမည်ကျော်မြို့ကြီးများ၏နှစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိ. အဆိုပါ ဗင်းနစ်ကနေခရီး သို့ Florence သငျသညျအသက်ရှု-ယူပြီးရှုခင်းတလျှောက်ယူ အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော မြို့ရွာ. ဤသည်ခရီးသာနှစ်နာရီရှည်ပေမယ့်အမှန်တကယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သန့်စင်အတွေ့အကြုံကို. နှစ်ခုမြို့ကြီးများအကြားသွားလာရန်မပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်.
မီလန် to Bolzano is our last pick for the5အီတလီမှာသာယာလှပရထားခရီး
မီလန်ထံမှ Bolzano တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ရထားစီးတွေ့ကြုံခံစား. အီတလီအဲလ်ပ်တောင်တန်းကိုတက်စေသောအနီရောင်များနှင့်သိသိသာသာရော့ခ်တောင်ပေါ်ကမ္ဘာ၏ဖက်ရှင်မြို့တော်ကနေသင်တို့ကိုယူပြီး. အီတလီနိုင်ငံရဲ့ဟောင်းများကိုမြို့များကိုကြည့်ပါ, ခမ်းနားကျေးလက်နှင့်ဥရောပထဲမှာအလှဆုံးနှင့်ဓါတ်ပုံတောင်များ. Bolzano ဝင်ရောက်အီတလီနိုင်ငံထွက်ခွာခြင်းနှင့်တူ၏ ဂျာမဏီဝင်ရောက်, က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်ဒီသေးငယ်တဲ့မြို့အဆင်းကိုဂျာမန်ဖြစ်ပါသည် သြစတြီးယား before World War I. ဤသည်သာယာလှပ ရထားခရီး မှော်ဖြစ်ပါသည်!
Trento Bolzano မှရထား
မီလန် Bolzano မှရထား
Bologna Bolzano မှရထား
ဗင်းနစ် Bolzano မှရထား
သင်အကြိုက်ဆုံးဥရောပမြို့သို့ရထားကိုယူပြီးစဉ်းစား? ကြှနျုပျတို့၏ website ကိုသွားပါ Saveatrain.com အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-most-scenic-train-journeys-in-italy-save-a-train-blog/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml သင် / သို့မဟုတ် / nl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / es ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#railjourney #ဇါတ်စင်နှင့်ဆိုင်သော #scenictrips longtrainjourneys ရထားခရီးသွား views